Drywall fisarahana rafitra
Metal Stud sy ny lalana
Unique fantsona vy
Aluminium rindrina & valindrihana rafitra
Simenitra miloko board
Normal simenitra board
Wood varimbazaha simenitra board
EPS simenitra board
Taratasy tohanan'ny gypsum board
Tantera-drano gypsum board
Phenolic sombin-javatra board
Rock volon'ondry insulation
Hanisy manda vy Stud dia ny ampahany amin'ny fiainana
ny mpitantana ny 18-08-01
Noho ny endri-javatra tsara, vy Stud hanisy no be mpampiasa noho ny tetikasa fanorenana.
Nisy fotoana fahanginana ho an'ny niharam-boina ny vanja grika
ny mpitantana ny 18-07-28
Ny ratsy indrindra Gresy afo dia niaina tao anatin'ny folo taona mahery nanomboka ny Alatsinainy, charring trano sy fiara araka ny nandoro ny alalan 'ny faritra amoron-tsiraka Attica manodidina Atena. Raha kely indrindra dia 74 ny olona maty dia voamarina avy amin'ny ny afo sy ny maro hafa mbola tsy hita. Tandremo ny afo ny fisorohana, ny fiarovana firs ...
ny mpitantana ny 18-07-24
ny mpitantana ny 18-07-19
Vao haingana ny tahan'ny fifanakalozana dia tsy miovaova, ka nidina isan'andro. Amin'ny ankapobeny, ny fironana miakatra hatramin'ny fotoana izao.
Nisy varavarankely vaovao mba hahita antsika
Ary mirehareha ny efa natomboka ny tranonkala vaovao. Mampiseho ny sasany amin'ireo vokatra izay Changye mamokatra sy ny tetikasa no naorina. Raha toa ka tsy nandre ny Changye teo aloha, manomboka eto ho fantatrareo anay tsara. Rehefa mitombo ny raharaham-barotra lehibe kokoa, izany no nanorenanay io vohikala vaovao noho ny fangatahan'ny mpanjifa ny ...
R1005, fomba amam-panao Building, Xin'an faha-3 Road, Bao'an District